Eyona Wineries Aseyurophu Njani Ukufumana Apho | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Eyona Wineries Aseyurophu Njani Ukufumana Apho
Makhaya iwayini imimandla Yurophu ingaba i-phupha kuba wonke iwayini connoisseur. izidiliya eziba obumangalisayo, sezulu libalele, amawa ingane, nokutya okumnandi ukuchaza ezi mimandla iwayini ephezulu. Ukuba ukhe ubene a iwayini lover kwaye ufuna ukubona Eyona Wineries Aseyurophu Njani Ukufumana Apho, Gcina A Train kuya kukunceda unike- khona!
Funda kwi ukwazi oko eYurophu kufuneka anikele abathandi iwayini. Siya bet ubuya sele zipakishwe engqondweni yakho phambi kokugqiba eli nqaku!
iiwayini Best eYurophu: Fransi
Region Champagne, Fransi
Ezinye kakhulu adumileyo kunye iiwayini Best eYurophu zifumaneka Ishampeyini. Kubalulekile i namanani engqongileyo kuba ngumhla uhambo ukusuka Paris, kodwa kukho ezininzi izindlu Champagne ukuba uhlole zombini saseReims and Epernay, apho uya kufumana amagama ezidumileyo ezifana Veuve Clicquot yaye Tattinger. Kutshanje ummandla Champagne igama a site UNESCO Heritage World, nto leyo draw enkulu wokhenketho kummandla, kunye ezintabeni ezintle weqondo ezele izidiliya.
Paris ukuba Nancy Oololiwe
Metz ukuba Paris Oololiwe
Nancy ukuba Paris Oololiwe
Rhone Valley, Fransi
I-Rhone Intlambo iwayini ingingqi sele okuninzi ukunikela kwi yenkcubeko incopho ka-imboniselo kunye Lyon ekubeni omnye UNESCO Ihlabathi zelifa Lemveli. Layo esilula, yokupheka yokwenene, I Rhone izulu lover iwayini kunye iiwayini edume Crozes-Hermitage, Cote-Rotie kunye Chateauneuf-du-Pape abakhenkethi iwayini ngokuzoba evela ehlabathini lonke.
Musa soyike ukuba ukhangela nje ixesha kakuhle ezinye buddies nakuba! Ukususela wabaqalayo kwiingcali, i-Rhone kakhulu ngokuqinisekileyo, omnye ukongeza kuluhlu. Nanku rundown ye iindawo yiya kwaye izinto ukubona.
ILyon ukuya kwiProvence ngoLoliwe
iiwayini Best eYurophu: Tuscany, ElamaTaliyane
I-Tuscany wineries anikele olugqibeleleyo iwayini lizwe amava. AyisiTuscany kuphela enezinye zazo I-Itali awona maxhwebhu adumileyo, efana DOC entsha Val d'Orcia, Vino Nobile di Montepulciano, ingingqi ngu bursting kunye ikratshi, uthando ezweni, kwaye immense uvuyo lwe ngayo nabanye.
Ukuba ufuna nento yokuba ngenye na isicwangciso eyakho Tuscany iwayini tour, you can rely on the expertise of a guide or driver. We usually ukuqasha imoto kwaye yenze ngokwethu, kodwa asizange sibe umqhubi yabucala Montalcino yamzekayo kuthi waya stop yethu pre-ezicwangcisiweyo. Ke enkulu, indlela yiya ukuba ukhe ubene worried malunga lakho, kummandla okanye ufuna ukuba basele iwayini endaweni spitting ke.
Uyakwazi ncwadi ibe tour in advance. Sicinga ukuba kuhle ukuba sihambe ukhenketho yabucala, Ndiyayithanda lento tour Montepulciano, tour Montalcino, okanye tour Chianti evela Viator.
Icebiso: Kwakhona kakhulu Siphakamisa ukufaka sasemini Winery kwizicwangciso zakho ngosuku ngalunye. Tuscan wines bamele ukuqwalasela okuthethwayo ukuba abe afunyanwe kunye ukudla.
iiwayini Best eYurophu: Mosel, Jemani
Sonke siyazi Sasejamani ngenxa yayo ibhiya kwaye iimoto, kodwa kude kube ngoku, we didn’t know that they have a kick-ass wine region too.
phakathi Koblenz umda ukuba Laksembheg kulele kuyo iwayini endala Jamani. kakade, Amaroma wabona enokwenzeka kwi-eshushu oomatshini-ukutshintsha kwemozulu kunye nutrient-umhlaba otyebileyo. namhlanje, the vineyards of the Moselle region produce some of the world’s best Rieslings.
Kukho abaliqela ukuba ukhethe kusuka, kodwa phezulu kuluhlu lwethu Weingut noWilli Schaer. A isidiliya encinane ezabhalwa emva 1121. I-Schafer usapho ikakhulu relies kwi zabo baqeqeshwe uluvo incasa yawo gut instinct xa oko iza isigqibo eyona ixesha lokuvuna ngamnye icandelo zabo imidiliyaname. Esicinga badass!
Usapho kuphela oluvelisa Riesling kwi zabo 4.2 eehektare zomhlaba obubonakala ngokuba ulungelelwano egqibeleleyo phakathi asidi nesakhiwo. Iwayini ngokunzulu-akukhuthazwa njengangoku zithunyelwa kulo lonke ihlabathi. Ukuba ngaba ungathanda ukuba uxhamle iwayini on-site, qiniseka ukuba wenze amalungiselelo kwangaphambili.
iiwayini Best eYurophu: Lavaux, Swizalend
lwediliya abacimi: Yinto ibinzana rhoqo abaqeshwe ukuchaza zokulima-mhlaba ezinzima. Lavaux, Switzerland is a region that exemplifies the concept perfectly.
Lavaux yi isiselo somdiliya sub-kummandla Vaud, emi kunxweme osemantla Lake Geneva, Swizalend. le ndawo, apho luthathe iifama i-enviable indawo kwi empuma nesiqingatha i echibini, yaziwa ukuvelisa omhlophe steely iwayini, ikakhulu ukusuka Chasselas kweediliya.
Ixesha lokuqala Amehlo akho ubeke phezu masimu zalo eweni, wena usindwa yokunqaba okanye kuzo zonke. (Ingakumbi ukubeka ibhotile ezimbalwa zewayini). Lunxulumano yi - UNESCO njenge World Heritage Site, nganeno ilanga-nisikelelweyo of Lake Geneva sekudala isicwangciso fairytale lwembali egcwele balcony, zendalo amanzi aluhlaza ukuba ndifeze kuphela ngakumbi iglasi Chasselas bendawo. Ngokufanayo, layo lake-hugging plots soar at extreme slants that only a mountain goat and team should harvest.
Ebudeni benkulungwane ye-11, ezi baninzi hillsides belonged ukuba Benedictine kwaye Cistercian monasteries. Yaba ithe abaye ngokuyibuyisela ndawo eyayikade emathafeni zibe izidiliya nemveliso ukuba kwenzeka ukuba ezikude yokucoca.
Le emehlweni ngaphandle window uloliwe Indlela Lausanne:
Idolophu Lausanne ngokupheleleyo imi kwelinye ekupheleni Lavaux. Lenza kuba elungileyo vantage ku ukuhlola ingingqi. ngaphakathi Switzerland, Lausanne ngenene umnini uninzi xa kuziwa ezidiliyeni. (Le Thethani onazo iwayini mmandla ikhula kungekho mncinci kuno 62 zebhola, ekuveliseni ukuya ku 400’000 iibhotile ngonyaka.)
Back iibhegi zakho uze ubaqononondise iglasi yakho. Oko&#8217;s ixesha babambisa a ukuqeqesha okanye ezimbini ukubonisa Eyona Wineries Aseyurophu. Gcina A Isitimela kuya kukunika amatikiti fast and nobunzima mahala kungekho ntlawulo ezifihlakeleyo. Ingaba ulunde ntoni? Ixesha ukufumana iwayini yakho, on!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia ngeposi Eyona Wineries Aseyurophu Njani Ukufumana Apho ikhadi lakho site? ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-wineries-europe/- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#EuropeWine #TrainandWine #wineries #winetasting #winetastinginEurope europetravel isiselo somdiliya winetour